Hargeisa : Mulkiilaha Hotelka SKY oo la Xidhay markii uu diiday in Dad lagu Karantiilo Hotelkiisa ! | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Hargeisa : Mulkiilaha Hotelka SKY oo la Xidhay markii uu diiday in Dad lagu Karantiilo Hotelkiisa !
Mar 26, 2020 - 1 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Somaliland ayaa dhawaan amar ku bixisay in la karantiilo mudo 14-cisho ah si loo hubiyo in aysan qabin cudurka Caronavirus dad ka yimid Qurbaha oo ay magaalada Hargeysa keentay Diyaarada Ethiopian Airlines .
Sida aan wararka ku helnay guddiga Somaliland u qaabilsan kahortaga Caabuqa Caronavirus ayey ku adkaatay in ay helaan guryo iyo hotelo ay dejiyaan dadka lagu karantiilay magaalada Hargeysa.
Milkiilaha hotelka Sky iyo xaaskiisa ayaa la sheegay in ay diideen in Hotelkooda lagu karantiilo dadka ka yimid qurbaha, waxa ayna sheegeen milkiilayaashan in Hotelkooda aysan u rabin dad caafimaadkooda laga shakisan yahay.
Guddiga kahortaga iyo faafida Caronavirus ee Somaliland ayaa la sheegay in ay amar ku bixiyeen in la xidho lamaanahan diiday in Hotelkooda lagu karantiilo dadka dibadda ka yimid .
Guddiga qaabilsan kahortaga Caabuqa Caronavirus ayaa sheegay in la karantiilayo dadka ka yimaada qurbaha , waxaana guddiga la sheegay in ay ku adkaatay in ay helaan hotelo iyo guryo dadka lagu karantiilo.
Dad badan ayaa dhaleecayn ugu jeediyey Xukuumadda Go’aanka ay ku xidhay Maamulaha Hotelka Gaarka loo leeyahay, Waxayna ku tilmaamene ku Tagri fal Awoodeed.
Dulkii dowlada e danta guud horaa loo siiyey dadku abtirsada snm hada waxayku haystaan beertii ilma salebaan bide markay dhulkii danta guud dhamaysteen muuse biixi iyo kuwii ka hireeyey ba waxayka fakarayaan maxaan cunaa tuugo baahan